Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Lalao Video? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Valio ireto raha hainao
Ny maha tsara azy
Ny maha ratsy azy
Mahazo vola an’arivo tapitrisa dolara ny mpamokatra lalao video, any Etazonia.
Olona firy taona no tena mpanao lalao video any?
Firy ny lahy, ary firy ny vavy?
55 isan-jato ny lahy; 45 isan-jato ny vavy
15 isan-jato ny lahy; 85 isan-jato ny vavy
Iza amin’ireto ambany ireto no tena mpilalao?
Vehivavy 18 taona no ho miakatra
Ankizilahy 17 taona no ho midina
Valiny (fanadihadiana natao tamin’ny 2013):
A. Vehivavy ny 45 isan-jato, izany hoe efa ho ny antsasany.
A. Vehivavy 18 taona no ho miakatra ny 31 isan-jaton’izy ireo, ary ankizilahy 17 taona no ho midina ny 19 isan-jato.
Hita amin’io fanadihadiana io hoe olona hoatran’ny ahoana no tia lalao video. Tsy hita amin’io anefa hoe inona no mety ho vokatry ny lalao video eo aminao. Mety hisy vokany tsara izy ireny nefa koa mety hisy vokany ratsy.
Ireto ny hevitry ny tanora sasany momba ny lalao video. Mitovy hevitra amin’izy ireo ve ianao?
“Mahafinaritra ilay izy rehefa ataonao miaraka amin’ny fianakavianao sy ny namanao, satria lasa mifankatia ianareo.”—Irene.
“Mba verivery dia ianao, dia tsy mieritreritra an’izay olana mahazo anao.”—Annette.
“Mampianatra anao ho kingakinga ilay izy!”—Christopher.
“Mampianatra anao hahay hamaha olana ilay izy.”—Amy.
“Tsara ilay izy satria mampiasa saina, dia lasa mahitahita hevitra sy mahay mitady tetika isan-karazany ianao.”—Anthony.
“Mampianatra ny mpinamana hifanampy ny sasany.”—Thomas.
“Mampihetsika vatana ny lalao video sasany, ka mahasalama sy mampavitribitrika.”—Jael.
Ekenao ve ny sasany amin’ireo, sa izy rehetra mihitsy? Mety hahasoa tokoa ny lalao video sasany, satria sady kilalaon-tsaina no fanatanjahan-tena. Ary na dia fanalana andro fotsiny aza izy ireny, araka ilay tenin’i Annette hoe “mba verivery dia ianao”, dia tsy voatery ho ratsy foana akory izany.
● Milaza ny Baiboly hoe “misy fotoanany daholo ny raharaha rehetra etỳ ambanin’ny lanitra”, anisan’izany ny fialam-boly.—Mpitoriteny 3:1-4.
Mandany ny fotoananao ve ny lalao video?
“Tsy mahafehy tena mihitsy aho. Miteny foana aho hoe: ‘Farany sisa ity!’ Adiny firy aorian’izay anefa aho mbola eo ihany!”—Annette.
“Mba mieritreritra erỳ ianao hoe nahavita zavatra satria nandresy indimy. Nefa inona akory no teo! Ny fotoananao fotsiny no lany, fa ianao tsy nahavita na inona na inona akory.”—Serena.
Tadidio izao: Raha lany ny volanao, dia mbola afaka manangona ianao. Tsy mba hoatr’izany anefa ny fotoana. Aza lanilanina fotsiny àry ny fotoana satria azo lazaina hoe mbola sarobidy noho ny vola izy io.
● Hoy ny Baiboly: “Mitondrà tena amim-pahendrena foana ... ka mahaiza manararaotra fotoana.”—Kolosianina 4:5.
Misy vokany eo amin’ny sainao ve ilay lalao?
“Misy zavatra mampigadra na mahavoaheloka ho faty raha tena atao, nefa tsy matahotra mihitsy ianao manao an’ilay izy ao amin’ny lalao video.”—Seth.
“Be dia be ny kilalao misy hoe mila mandresy ny fahavalonao ianao, dia mampiasa fomba mahatsiravina isan-karazany ianao mba hamonoana azy.”—Annette.
“Mahateny zavatra tsy fiteny amin’ny namanao ianao indraindray eo am-pilalaovana eo, ohatra hoe ‘Matiko ialahy!’ na hoe ‘Vonoiko ialahy androany!’ ”—Nathan.
Tadidio izao: Aza manao lalao video misy zavatra halan’Andriamanitra, ohatra hoe misy herisetra na fijangajangana na herin’ny maizina.—Galatianina 5:19-21; Efesianina 5:10; 1 Jaona 2:15, 16.
● Milaza ny Baiboly hoe tsy ny olona mahery setra ihany no halan’i Jehovah, fa ny “olona tia herisetra” koa. (Salamo 11:5) Marina fa tsy hita amin’ny lalao video tianao hoe ho lasa olona hoatran’ny ahoana ianao. Mety ho efa hita sahady anefa hoe karazan’olona hoatran’ny ahoana ianao.
Eritrereto izao: Hoy ny boky Getting to Calm: “Misy vokany kokoa amin’ny ankizy ny manao lalao video misy herisetra noho ny hoe mahita herisetra ao amin’ny tele. Tsy hoe mijery mpilalao masiaka sy mpamono olona fotsiny mantsy izy, fa izy mihitsy ilay mpilalao. Mitovy amin’ny mpampianatra ny lalao video, saingy herisetra no tena ampianariny.”—Ampitahao amin’ny Isaia 2:4.
Maro ny tanora niezaka tsy ho variana loatra amin’ny lalao video. Anisan’izany ireto:
“Alina be mihitsy aho taloha vao natory fa nilaozako nanao lalao video. Nieritreritra aho hoe: ‘Izaho ange tsy mila matory ela be izany e! Adiny dimy dia ampy. Aleo hanao kely farany sisa!’ Fa tsy manao an’izany intsony aho izao. Mbola milalao ihany aho, fa tsindraindray. Tsy maintsy atao amin’ny antonony ihany ny zava-drehetra.”—Joseph.
“Niezaka tsy nilalao firy intsony aho tato ho ato, dia lasa mahavita zavatra be dia be! Lasa nahay nitory sy nampianatra kokoa aho, dia nahavita nanampy olona tao amin’ny fiangonanay, dia nahavita nianatra piano mihitsy aza. Be dia be kay ny zavatra hafa azo atao!”—David.
● Milaza ny Baiboly hoe “mahay mandanjalanja eo amin’izay zavatra fanaony” ny olona matotra. (1 Timoty 3:2, 11) Tia miala voly izy nefa mahavita mifehy tena. Ferany ny fotoana ialany voly.—Efesianina 5:10.
Tadidio izao: Mahafinaritra ny lalao video raha atao araka ny antonony. Tandremo àry sao lasa lany fotoana amin’ny lalao video, ka lasa manadino an’izay zavatra tena tokony hatao. Sady tsy aleo lavitra ve miezaka mafy hanatratra tanjona tena izy, toy izay hiezaka mafy hanatratra tanjona amin’ny kilalao?
“Raha ao amin’ny efitra fatorianao ilay kilalao, ka azon’ny fakam-panahy hilalao foana ianao, dia afindrao any an-toeran-kafa ilay izy. Mety hieritreritra ianao hoe: ‘Hajanoko ity rehefa kelikely eo’, kanefa raha mbola ao amin’ny efitra fatorianao ilay kilalao, dia ho raikitra eo ihany ianao mandra-paharainan’ny andro.”—Madison.
“Miteny ianao indraindray hoe: ‘Hijanona aho afaka 10 na 20 minitra.’ Fa tsy mety mihitsy ilay izy e! Aleo fotsiny tonga dia vonoina ilay kilalao, dia mandeha mitady zavatra hafa hatao. Maninona moa raha ajanona kely mihitsy ny lalao video e! Ohatra hoe mandritra ny andro vitsivitsy? Dia anaovana zavatra mampihetsiketsika vatana ilay fotoana, ohatra hoe baskety na zavatra hafa.”—Corbin.
“Efa lasa andevozin’ny lalao video ianao raha mahavita milalao hatramin’ny iray maraina na mihoatra an’izany. Lasa ilay kilalao indray no miteny aminao hoe amin’izao na amin’izao ianao vao mahazo matory. Mankarary izany, sady mandreraka anao ny ampitson’iny, nefa tsy mba zavatra mahasoa akory ilay izy.”—Alexandria.
Fahazarana Fiadanan-tsaina & Fahasambarana Manontany ny Tanora Tanora
Ny Lalao Video